झुक्किएर पनि यस्ता खानेकुराहरु साना केटाकेटीलाई खुवाउनु हुदैन, पढेर सेयर गर्नुहाेला - Info Nepal
INFONPLशिक्षाझुक्किएर पनि यस्ता खानेकुराहरु साना केटाकेटीलाई खुवाउनु हुदैन, पढेर सेयर गर्नुहाेला
झुक्किएर पनि यस्ता खानेकुराहरु साना केटाकेटीलाई खुवाउनु हुदैन, पढेर सेयर गर्नुहाेला । कहिलेकाही शिशुको लागि कस्तो आहार उचित हुन्छ भन्ने जानकारी नहुदाँ त्यसले उनीहरुको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेकाे हुन्छ ।
बच्चाको लालनपालनको लागि पोषिलो खानेकुरा आवश्यक ठानेर उनीहरुलाई पोषणयुक्त खानेकुरा ख्वाइन्छ तर, त्यस्ता खानेकुरा सानो बच्चाको लागि अनुकुल नहुन पनि सक्छ । त्यसैले कुनैपनि खानेकुरा ख्वाउनुअघि त्यसको अ-सरबारे पनि जान्नु आवश्यक हुन्छ जुम निम्म प्रकार रहेका छन्:-
१) अण्डा:- कतिलाई नहुन सक्छ कि बालबालिकामा अण्डाको ए-लर्जी हुनसक्छ । अण्डाको ए-लर्जीकै कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ , कसैकसैमा अण्डाको ए-लर्जी यति धेरै हुन्छ कि अण्डाको सेवनले उनीहरुलाई वा-न्ता हुनु, प-खाला लाग्नु पेट फुल्नुका साथै ज्या-नै जानेसम्मको ख-तरा बढेर जान्छ । यदि अण्डा खाए लगत्तै बच्चाको पेट अचानक फुलेमा, राम्ररी सास लिन नसके, चि-लाउने, मुटुको धड्कन बढेमा तुरुन्तै चिकित्सककाहाँ लानुपर्छ ।
२) गाईको दूध:- हामीलाई लाग्छ, गाईको दूध पोषिलो हुन्छ, त्यसैले शिशुका लागि फाइदाजनक छ । जबकी एक वर्ष भन्दा साना बालबालिकाको लागि गाईको दूध हा-नीकारक छ । गाईको दूधमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन, मिनरल्स तथा जिङ्क हुन्छ, जुन साना बच्चाले पचाउन सक्दैनन् । त्यसैले गाईको दूध ख्वाउदा शिशुहरुलाई उल्टी आउने, पेट दुख्ने, आउ पर्ने लगायतका समस्या हुने गर्छ जसले शिशुलको मृगौलालाई समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैले, यदी एक वर्ष मुनीका बालबालिकालाई गाईको दूध नै ख्वाउनु परेमा पनि एक चौथाई दूधमा दुई चाथाई बराबर पानी मिसाएर सेवन गराउन चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन् ।
३) माछा:- माछामा का-डा हुने भएकोले अभिभावक आ- ना शिशुलाई माछा सेवन गराउन ड-राउँछन् जुन स्वभाविक पनि छ । माछामा ओमगा ३ नामक फैटी ए-सिड पाइन्छ । त्यस्तै यसमा मर्करीको मात्रा धेरै हुन्छ, जुन बालबालिकाको शारीरीक विकासको लागि जरुरी पनि छ । यद्यपी, माछामा का-डा हुने भएकोले यस्ता का-डावाल माछा ख्वाउन अगाडी सजगता अपनाउन जरुरी पनि छ ।
४) बदाम:- शिुशुलाई कुनै पनि बदाम ख्वाउनु पूर्व सा-वधानी अपनाउन जरुरी छ । यस्ता बदाम शिशुले चपाउन नसक्ने भएकाले घाटीमा अड्-किने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यसैले, जब बच्चाको दातँ आउन थाल्छ, तव मात्र शिशुलाई बदाम ख्वाउन उपर्युक्त हुन्छ ।
५) कैफिनयुक्त पदार्थ:- निश्चित उमेर पश्चात्तमात्र कैफिन लिनु उपर्युक्त हुन्छ । सानै उमेरमा कैफिनयुक्त पदार्थको सेवनले शरीरमा नकारात्मक समस्या देखिने गर्छ । यसल बालबालिकामा अनिद्राको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले, कुनै पनि पदार्थ सेवन गराउनु पूर्व चिकित्सकको सल्लाह अनिवार्य मानिन्छ ।
६) मह:- मह हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । जबकी स-साना बालबालिकाहरुको लागि यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । विशेषगरी एक वर्ष मुनीका बालबालिकाको लागि मह निकै हानीकारक छ ।
७) घाटीमा अड्कने खानेकुरा:- ससाना बच्चाले चबाएर खान सक्दैनन् जसका कारण उनीहरुले खाएको खानेकुरा घाटीमा अड्कने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
मेवाको बिउ सेवन गर्नाले क्यान्सर, किड्नीकाे समस्या लगायतका थुप्रै ख-तरनाक रोगहरु बाट छुट्कारा, यस्ताे छ तरिका !
कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका पल्टाउदै गरेको टिकटक भिडियाे भाईरल हुँदै, यस्ताे छ कारण (भिडियाे हेर्नुस्)
दु:खद खबर; नेपालमा आज फेरि ह्वात्तै बढ्याे काे-राेना संक्रमितकाे सङ्ख्या, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?(हेर्नुहाेस् विवरण सहित)